The Government of Myanmar has granted Agrément to the appointment of Mr. Kesang Wangdi as the Non-Resident Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Bhutan to Myanmar – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Government of Myanmar has granted Agrément to the appointment of Mr. Kesang Wangdi as the Non-Resident Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Bhutan to Myanmar
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has granted Agrément to the appointment of Mr. Kesang Wangdi as the Non-Resident Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Bhutan to the Republic of the Union of Myanmar.
Mr. Kesang Wangdi joined Ministry of Foreign Affairs of Bhutan as an Assistant Director in 1982. He completed academic work and trainings in science, economics and international relations. As for foreign assignments, he served at various missions abroad: at Royal Bhutanese Embassy in India (1986-1991); at Consul General of Bhutan in the United States (1992-98); and at the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Secretariat in Nepal (2002-2005). He was appointed as Director-General in Tourism Council of Bhutan from 2008 to 2012 before he became an Ambassador of Bhutan.
Mr. Kesang Wangdi is presently serving as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Thailand, Australia and Singapore. He is married withason andadaughter.
Dated. 14 July 2014
မစ္စတာ ကီဆန် ဝမ်ဒီအား ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်လျက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ဘူတန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်ရန် အဆိုပြုချက်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ ကီဆန် ဝမ်ဒီ သည် ဘူတန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် သိပ္ပံပညာ၊ စီးပွားရေး နှင့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ်များကို လေ့လာဆည်းပူးခဲ့ပါသည်။ ပြည်ပတာဝန်များ အဖြစ် မစ္စတာ ကီဆန် ဝမ်ဒီ သည် ၁၉၈၆-၁၉၉၁ ခုနှစ်အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဘူတန်သံရုံးတွင် လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၂-၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဘူတန် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး တွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၂-၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ နီပေါနိုင်ငံရှိ တောင်အာရှ ဒေသဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအသင်း(ဆာ့ခ်) အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးတွင်လည်းကောင်း၊ အသီးသီးတာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်မထမ်းဆောင်မီ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထိ ဘူတန်နိုင်ငံ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကောင်စီတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိတွင် မစ္စတာ ကီဆန် ဝမ်ဒီ သည် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာဘူတန် သံအမတ်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်၍ ဩစတြေးလျနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဘူတန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သားတစ်ဦးနှင့် သမီးတစ်ဦး ထွန်းကားပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်